Xildhibaanada Puntland: Rag Aamusay iyo Riyo Aamusay Reerkoodii Gabe [MAQAAL] | SAHAN ONLINE
Xildhibaanada Puntland: Rag Aamusay iyo Riyo Aamusay Reerkoodii Gabe [MAQAAL]
Xaalada siyaasadeed iyo amni oo Puntland ku sugan tahay hadda, waxaa muuqata in dad yari dareenkaasi saameeyay.
maamulka Puntland mushkiladii dekedda Bosaso kaga furnayd waxaa ugu soo darsantay xaalada kaga furantay Tukaraq oo gacanta Puntland ka baxday oo la wada daawanayo.
Barlamaanku sidii uu dekedda Bosaso uga aamusay ayuu Tukaraq uga aamusay,arrintaasi suura gal ma tahay?
Dalku wauxuu gelayaa doorashooyin ay ka hartay 9 bilood keliya, madaxda maamulkuna waxay ku jaha-wareersan yihiin sidii ay xukunka dib ugu soo noqon lahaayeen.
Marka cida keli ah oo cod leh ama wax sixi karta waa Barlamaanka, in kastoo shacabku aad ugu ciil qabo aamuskooda iyo danaysigooda, misana waxaa lagu khasban yahay in loo aqoonsado, inay yihiin iyagu kuwa keliya oo dalkaan ka adbaadin kara nidaam daro iyo fowdo soo foodsaarta iyo in taladu faraha ka baxdo.
Dhismihii maamulka Puntland 1998, bisha August ayey u buuxsamaysa 20 guuradii dhismaheeda, waana taariikh iyo waqti aad u badan oo la oran karo wax badan oo la qaban karay ayaan maamulku qaban.
Waxaase wax kasta hadda ka muhiimsan oo loo baahan yahay Barlamaanka Puntland inuu culayska ku saaro C/weli Gaas sidii uu maxkamad dastuuri ah dalka ugu samayn lahaa, taasoo haddaan la helin ay adkaanayso sharci iyo nidaam kala haga siyaasiyiinta xukun doonka ah, Herdankooda oo faraha badan inay dhibtu dib ugu soo noqon doonta bulshada oo ay ku jaha wareerinayaan lacag, Qabiil iyo Kala qaybin taaso burbur uhorseedaysa jiritaanka, sharafta iyo magaca Puntland cadowgeeduna ku farxayo.
Ilaa hadda lama dareemin qaabka SNM ay degaan riixa dhul-fidsiga ah hadba waqti ugu soo durkaysa gobolka Sool laga soo bilaabo 2004 oo ay qabsatay Ari-cadeeye oo 60km u jirta Laascaanood.
2007, xiligii Cadde Muuse, inkasta oo wasiirkii arrimaha gudaha ee hore Maxamed Cabdi Xaabsade uu sabab u ahaa qabsashada Laascaanood, misana kala qaybsanaanta shacabka Laascaanood ayaa fara bixisay.
Xiligii C/raxmaan Faroole, SNM waxay qabsatay tuulada Gambare oo kala barta Laascaanood iyo Garoowe.
8 Jannaayo 2018, SNM waxay qabsatay iyadoo ay horgal u yihiin qaybo ka mid ah shacabka Sool, Tuulada Tukaraq oo Garowe u jirta in ka yar 30km, oo Muuse biixi ku faanay khudbadii sannadlaha ahayd ee uu 25 March 2018, i jeediyey labada aqal ee somaliland, inuu awoodo inuu Garoowe qabsado, laakiin ay ka sariigteen, loomana jawaabin.
W/Q: Khaliif Maxamed Barre
Maqaalkani wuxuu ka turjumayaa aragtida Qoraaga loomana fasiran karo tan SAHANONLINE.COM, Sahanonline waxay oo soo dhaweynaysaa maqaalada sida gaarka ah loogu soo diro.